केपी ओलीका कारण शीतलनिवासमा बज्यो खतराको घण्टी ! तनाबमा राष्ट्रपति — Imandarmedia.com
केपी ओलीका कारण शीतलनिवासमा बज्यो खतराको घण्टी ! तनाबमा राष्ट्रपति
काठमाडौँ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण विद्यादेवी भण्डारी विद्यादेवी भण्डारीको पद धरापमा पर्ने भएको छ। ओलीको एक्लो निर्णयले नै भण्डारी दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति भएकी हुन्।
ओली आफ्नै दम्भ र घमण्डका कारण प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन्। नेकपाको नाममा पाएको जनमतको अवमूल्यन गरेका उनले ४० महिना २५ दिन सरकार चलाए। ओलीले पार्टीलाई एकलौटी ढंगले चलाउन थालेपछि सबैभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्यो। ७ मध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार बनेको थियो, जसमध्ये २ वटामा माओवादीका मुख्यमन्त्री रहेका थिए।
४ वटामै ओलीनिकट मुख्यमन्त्री रहेका थिए। गण्डकी सरकार ढलेसँगै आज लुम्विनी प्रदेश सरकार पनि ढलेको छ। लुम्विनीका मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेलले आज विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो तर उनले सरकार टिकाउन नसकेपछि राजीनामा दिए। लुम्विनीमा बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सूचना जारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी दल विभाजनसम्वन्धी अध्यादेश ल्याइदिने तयारी गरेको छ। अध्यादेशपछि नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी बनाउँछन् र पाँच वटा पार्टीको गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाग्ने निश्चित छ।
ओली गुटकै एकजना सांसदले प्रदेश १ को र बागमती सरकार पनि ढल्ने ठोकुवा गरे। अब हाम्रो सरकार कहीँ पनि रहँदैन, ओलीकै कारण यो भयो तर भन्नु भएन’ उनले भने ‘यो अवस्था आउनु दुःखद् हो, ओलीले जे मन लाग्छ त्यही गरेका छन्, हामी साक्षी बस्न नसक्ने भयौं। भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभा सांसदको दुई तिहाई चाहिन्छ।
अहिले संसदमा २ सय ७१ सांसद् छन्, यसको दुई तिहाई १ सय ८० हुन्छ। नेपाल फुटेपछि उनलाई ओली पक्षका अरु सांसदले पनि समर्थन गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिको पद धरापमा छ। साउन ३ गते देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिँदा १ सय ६५ सांसदको समर्थन पाएका थिए। नेपाल पक्षका १० जना सांसद तटस्थ बसेका थिए।
राष्ट्रपतिको काम असंवैधानिक भएकाले अरु सांसदको पनि समर्थन हुने सत्ता गठबन्धनको बुझाई छ।देउवाको विरुद्धमा ८३ मत परेको थियो। ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा ९३ मत पाएका थिए, ओलीको मत क्रमशः घट्दै गएको छ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भए पनि उनले राष्ट्रपतिको हैसियतले काम गर्न पाउने छिन्। महाअभियोगबाट हटाइए उनले पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतले सरकारबाट पाउने कुनै पनि प्रकारको सुविधा पाउने छैनन् तर उनले महाअभियोग लागेपछि राजीनामा दिइन् भने त्यो सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
थक प्रयासका बीच पनि पार्टी विभाजन रोक्न असफल भएका एमालेका तेस्रो धारका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि चारदिने समयसीमा तोकेर दबाब सिर्जना गरेका छन् । १० बुँदे सहमति निर्माणमा संलग्न नेतासहित नेपालको साथ छाडेका ५७ जना केन्द्रीय सदस्य र सांसदले शुक्रबार भेलामार्फत पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल दुवैमाथि समयसीमा तोकेर दबाब दिएका हुन् ।
‘अहिले नामै समाजवादी राखेपछि सबै कार्यदिशा समाजवाद भइहाल्यो । त्यसैले जनताको बहुदलीय समाजवाद नै हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम हुने प्रबल सम्भावना छ, तर सबैको सुझाबसहित राष्ट्रिय भेलाबाट पारित गर्छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले भने, ‘जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रयोग गर्ने क्रममा समाजवादकै कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने धेरैको मत छ, तर नामैमा धेरै लड्नु पनि भएन।